Xog: Dalal ay adagtahay in awood milateri lagu qabsado | Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dhowr ka mid ah dalalka dunida waxaa la sheegay iney adagtahay in ciidan ajnabi ah uu jiiro, waxaana magayadada dalalkaas maalmahaan qaadaa dhigayey warbaahinta aduunka.
1- Dalka Ruushka ayaa ah dal ay aad u adagtahay in awood lagu qabsado. Sababaha ayaa lagu sheegay in dalkaas uu ku fadhiyo dhul aad u ballaaran, iyo in kuleylkiis marna aad u badan yahay marna uu aad u qabowyahay.
Sidoo kale, waxaa lagu sheegay in dalkaasi leeyahay buuro waaweyn oo aad u farabadan, keymo baaxad leh, iyo dhul hoose. Waxaa sidoo kale, jiiritaanka dalkaas wax adag ka dhiagaya iyadoo dadkiisu kumanaan sano waaya-arag u yihiin dagaallada.
2- Switzerland ayaa iyadana la sheegayaa iney adagtahay in weerar milateri lagu jiiro. Dalkaas ayaa leh buuro xiriirsan oo muddo dheer ka saacidayey iney iska ilaaliyaan in gumeysi qabsado. Qeyb ka mid ah buuraha Alps ayaa dalkaas mara, kuwaasoo ay u adeegsan jireen iney dalkooda ku difaacaan.
Sidoo kale, dalkaan ayaa horay u sameystay qorshe loogu magac daray «Home Fortress», kaasoo micnihiisu yahay “Gaashaanka Dhulka Hooyo”, waxaana la dejiyey qarnigii 19-aad, iyadoo xilligaas Midowgii Soviet-ku halis ku hayey dalkaas.
Warbixin uu qoray Wagreyska kasoo baxa Britain ee “The Independent” ayaa lagu sheegay in inkastoo dalka Switzerland uu leeyahay 150 kun oo ciidan tababaran ah, haddan haddii lagu soo duulo uu heli karo 4 Milyan muwaadin oo dagaalka loo adeegsan karo iyo sidoo kale 3 Milyan kale oo diyaar in loo carbiyo howlgal milateri.
3- Dalalka ah Jazeeradaha gaarka u taagan sida Jaziiradda New Zealand ayaa warbixintu sheegtay iney adagtahay in xoog lagu jiiro.
Jaziiradda New Zealand ayaa ilaa 1000 Meyl ka fog dhulka ugu dhow ee dunida, waana dalka Australia oo isaguna ah Jaziirad kale oo ka mid ah dalalka ay adagtahay in awood lagu qabsado.
4- Iceland ayaa sidoo kale ka mid ah dalalka aan sida sahlan lagu qabsan karin, maxaa yeelaay wuxuu dhacaa bartamaha dhulka Woqooyiga Atlanta (North Atlantic aArea) oo ku dhow (The Arctic). Dalkaani ma lahan dekeddo badeed, waxaana ku badan buuraha caadiga ah iyo buuraha barrafka ah.